FSX kulabo okufanele baqale
Idea FSX kulabo okufanele baqale
amahora ngonyaka 1 16 edlule #975 by DRCW
Ake sibhekane nakho,
I-FSX yinqubo yokufunda hhayi nje ukuthi ingaba kanjani umshayeli we-virtual. Noma ubani owake waba eduze kwe-block uzokutshela
ukuthi kungakhathazeka kanjani uma wenza iphutha futhi kufanele uphinde ulayishe i-FSX bese uqala ngaphezulu. Yiqiniso lokho akuzange kujabulise
kimi (LOL) Okulandelayo yisitatimende salokho engikufundile kule minyaka futhi ngithemba ukuthi kuzokusiza ekwenzeni okokuqala noma
ukubuyisela i-FSX Deluxe noma i-Gold Edition.
ISIQEPHU 1: UHARDWARE NABAKHULU
Ngaphambi kokufaka i-FSX isihluthulelo sokuphumelela ukuqinisekisa ukuthi unepulatifomu enhle neqinile. Ungase ucabange
ukuvuselela i-PC yakho ngokufaka i-RAM / i-hard drive ehlukene njll njll. Noma yisiphi isimemezelo noma i-gamer ingakutshela uhlelo olwandayo
kwenza konke umehluko. I-FSX ihamba kahle nge-core processor quad core noma ibe ngcono ku-4 ghz noma ngaphezulu.
Abantu abaningi baqedile i-processor yabo Isibonelo 3.2 ghz ku-4ghz .. noma i-4ghz ku-4.5ghz. Pho kungani benza lokhu? Ngoba
I-FSX impela, inxanxathela enkulu kakhulu yeprosesa futhi kuyohlale ikhona abantu abaxosha amasistimu abo ekugcineni. Bayathanda
ziqhayise nge-200 fps kwi-intanethi. Ingabe lokhu kusho ukuthi nawe unakho? CHA ... Kunoma yiziphi izinguquko ozenza ohlelweni lwakho
ngaphezu kwama-specs efektri kukhona izingozi ezingashisa i-hardware yakho ngaphandle kokuthi wazi ukuthi wenzani,
sebenzisa ngalokho onakho nokuthi yini ongayithola.
Ukwenza umshini wakho ugijime i-FSX ukuze uthole ibhalansi emibili yehluzo futhi ufeze umgomo
thola ihluzo ozifunayo kanye nesilinganiso sefreyimu ye-30 fps. Okubaluleke kunazo zonke izindiza ezihamba phambili ze-stutter. Ngine-AMD core core AMD
i-processor egijima ku-3.5ghz futhi ngiyifake ngaphezulu kwe-3.7ghz kuphela ngokufaka umshayeli owengeziwe wokupholisa embhoshongweni wami
okuyinto eyenzelwe ukupholisa nokuvula umoya. Uma uthenge ikhompyutha kumthengisi wangakini, ungathanda ukufanisa
ukuguqula umbhoshongo kanye namamodeli amaningi esitolo akulula. Noma iyiphi ikhompiyutha esebenzisa amandla okugwedla wart wall wena plug
ngaphakathi kodonga cishe uhlelo olungenakwandiswa.
zibalulekile. Uma ungathí sina mayelana ne-simming futhi ufuna ukufaka okuningi kwesofthiwe yesithathu (indawo, izindiza, amafu
njll.) udinga okungenani i-1TB. Ngincoma i-hard drive ye-2TB. Ngiphakamisa futhi ukusebenzisa i-hard drive ehlukile
i-hard drive oyifakayo amawindi.
Uzofuna ukusebenzisa i-RAM enhle kakhulu (DDR3 njll.) Okuncane okudingekayo yi-4 gig ye-RAM kodwa ngempela
kufanele ucabangele i-8 gig ye-FSX ngesistimu engakwazi ukwandisa ku-32 gig ye-RAM phansi komgwaqo.
Nansi lapho ungasebenzisa okuningi kwe $$$. Kunamakhadi ahlile amanzi agijima azungeze i-$ 1500 US. WOW Angikwazi ukukhokhela
lokho! Udinga ihluzo elihle lekhasi elikwazi ukugijima lizungeze u-$ 150 US. Ngisebenzisa i-2 AMD Radeon R9 200 Series
Amakhadi ezithombe asebenza ku-Firewire. Ikhadi elibonisa ukucacisa elihle elizofakwa lizosiza ukuthatha lo mthwalo ukuthi uphume kwiprosesa yakho. Bangu
amakhadi amaningi laphaya ngakho-ke iseluleko sami esingcono kakhulu ukucwaninga futhi uthole i-bang best for buck yakho. Ukusesha amaforamu e-FSX kuzokusiza
ekwenzeni isinqumo esifanele okokuqala.
Kube nezinkinga lapho ukubuyekezwa kwabashayeli be-Graphic Card kubangele amaphutha abulalayo ku-FSX. Ngaphambi kokuthenga umdwebo
ikhadi bona uma ungathola noma yiziphi izinkinga ezaziwayo nalabo abashayela amakhadi noma ezinye izikhalazo ku-FSX. Uma ungenjalo
unenkinga ngekhadi lakho le-graphiti yamanje futhi wenza ukubuyekezwa komshayeli bese ngokuzumayo kunezinkinga,
buyela emuva kumshayeli wokugcina oyifakile.
I-Overkill, Overkill, Overkill !!! Ufuna ukunikezwa kwamandla okungaphezu kokulinganiswa kwe-hardware yakho. Lokhu kuzokuvumela ukuthi ungeze noma
shintsha ihadiwe ngaphandle kokulayisha ngokweqile ukunikezwa kwamandla wakho. Nginamandla kagesi we-1000 watt okungaphezu kabili okuyikho
kudingeka ukugijima i-PC yami.
Ucwaningo nokulungiselela kusengaphambili kuyisihluthulelo ngaphambi kokufaka i-FSX.
Isigaba 2: Ukufaka nokukhulisa i-FSX
Manje njengoba sesigcizelele okuyisisekelo ekulandeleni, ake sifake i-FSX. Qaphela ukuthi lo mhlahlandlela wokufaka wenzelwe
Izinguqulo ze-FSX Deluxe ne-Gold hhayi isisindo se-FSX esisebenzisa ifomethi ehlukile.
Ngakho yiziphi umehluko phakathi kweDeluxe neGold?
I-Deluxe version ayifuni ngokusheshisa X futhi yilokho. Uma une-Deluxe version, uzokwenza
kudingeka ukufaka SP1 futhi SP2. Ngomagazini we-Gold nje nje ungeze i-disc yokusheshisa ngemuva kokufaka i-disc 1 ne-2
Isinyathelo 1: Ngaphambi kokufaka i-disc 1 & 2 yenza ifolda kumadokhumenti akho ngokukhetha ifolda entsha / chofoza ngakwesokudla futhi
igama lelo folda "FSX" bese uyihudula kudeskithophu yakho. Uma ufaka i-FSX disc 1 ukhethe izinketho eziningi bese uqala
ifolda ye-FSX kwideskithophu owadalile. Lokhu kuzofundisa i-FSX ukufaka lolu hlelo kulefolda kunokuba
Amafayela wohlelo (x86)
Uma kokubili disc disc 1 & 2 efakiwe FSX izoqala ngokuzenzakalelayo. Khona-ke uzothenjiswa ukufaka ikhodi yakho yokhiye womkhiqizo
bese usebenze lolu hlelo. Ngemuva kokusebenza akufaki ukusheshisa (igolide) noma ufake i-SP1 noma i -SP2 (Deluxe)! Qalisa kuqala
I-FSX kwi-flight mode yamahhala imizuzwana embalwa bese ushiya uhlelo.
Isinyathelo 2: Manje faka ukusheshisa (i-Gold) SP1 & SP2 (Deluxe). Ukuze i-Gold edition iqale i-FSX futhi uzophinde uphinde
kufanele ubeke ukhiye wakho womkhiqizo wokusheshisa ukuze uwusebenze. Khona-ke uzobe ukhuthazwa ukuvumela i-FSX
ukwengeza izici ezintsha zesikhiye kulolo phulo lokunweba. Khetha Yebo. Phinda uqale i-FSX uphinde ugijime imodi yendiza yamahhala
imizuzwana embalwa bese uphuma kuhlelo.
Isinyathelo 3: ( weqa lesi sinyathelo uma unayo idrayivu ye-1 kuphela) Uma unomshayeli ohlukile othanda ukuzinikezela
ngoba i-FSX manje iyoba yisikhathi sokuyikopisha futhi uyinamathisele kulokho kushayela.
Ake sithi amafasitela efakwe ku-drive C: futhi une-blank D: nayo efakwe ku-PC yakho. Khetha
Qala / ikhompyutha / idrayivu D:
Kopisha bese unamathisela ifolda ye-FSX kwideskithophu yakho kuDrayivu D: Le nqubo izothatha cishe nge-5 emaminithini we-10.
Uma likopishiwe manje uzodinga isinqamuleli esisha ukuze ukwazi ukugijima i-FSX kusuka kwideskithophu yakho. Okokuqala donsela isinqamuleli samanje
kwideskithophu yakho kuya ku-Recycle Bin. Yiya kuDrayivu D bese uvula ifolda ye-FSX. Skrolela phansi ku-FSX.EXE ifayela lesicelo,
chofoza ngakwesokudla kuso futhi ukhethe "dala isinqamuleli"bese uyidonsela kudeskithophu yakho. Lokhu kuzokuvumela ukuthi usebenzise i-FSX usebenzisa lokho
isinqamuleli. Once futhi ugijime i-FSX endimeni yendiza yamahhala ukuqinisekisa ukuthi uhlelo luzinzile. Manje ungasusa ifolda ye-FSX
kwideskithophu yakho. Uzogijima i-FSX ku-drive D: kusukela kule ndawo phambili.
Isinyathelo 4: I-Windows Vista, i-7 ne-8 efaka i-UIAUTOMATIONCORE.DLL yakho ku-FSX.
Ifayela le-uiautomationcore.dll liyadingeka ukuvimbela ezinye izingozi zedeskithophu ezaziwayo ku-FSX. Into ebaluleke kakhulu
kufanele ufake i-dll efanele yenguqulo yakho yamafasitela. Ukufaka okungalungile kungabangela izinkinga eziningi. Iya ku
injini yakho yokusesha bese uthayipha uiautomaioncore.dll ye-Vista / yewindi ye-Windows 7 / yewindi ye-Windows 8 / yewindi ye-8.1 eyake yaba khona
OS onayo. Uma usutholile inguqulo efanele, yikhiphe kudeskithophu yakho bese uyifaka kufolda yakho enkulu ye-FSX cha
kuphi enye !!! Gcina ikhophi yayo kwifolda yakho yamadokhumenti njenge-back-up.
Isinyathelo 5: Lungisa izilungiselelo zakho ku-FSX.
Run FSX bese ushintsha kusuka endizeni yamahhala kuya kuzilungiselelo. Nakhu lapho ungashintsha ihluzo, amafu, ithrafikhi njll ... Ngingakwazi ukuthayipha
ngaphandle kwesinyathelo ngesinyathelo kodwa kunalokho kunamanye amavidiyo amahle amakhulu ku-youtube. Kule vidiyo kunconywa ukuthi usebenzise ongaphandle
uhlaka lwama-frame limiter kodwa ngithole izinkinga nge-stutters kanye nokuhamba kwezindiza ngakho-ke ngincoma ukubeka isilinganiso sakho sohlaka lwe-FSX
i-limiter kuya ku-30 fps noma isigamu sesilinganiso sokuvuselela sokuqapha ividiyo yakho. Uma izilinganiso zakho zivuselela kabusha yi-70 bese usetha isilinganiso sakho sohlaka
umkhawulo we-35 fps.
Isinyathelo 6: Lungiselela i-FSX
Uma usuqedile izilungiselelo zakho futhi uvivinywa kwimodi yendiza yamahhala ukuze uthole i-fps engcono kakhulu nokuhlanganiswa kwesithombe sakho
uhlelo lungakunikela uzofuna ukuwagcina lapho. Manje sidinga ukulungisa FSX.CFG ifayela. Ngibhala intambo ngalokhu
isithangamu esigabeni esiphezulu se-FSX esibizwa ngokuthi "ama-FSX Fixes & Amathiphu ku-cfg" Sicela ubheke isigaba 1 esihlanganisa i-3 eyisisekelo
izinguquko zidinga ku-FSX. Kukhona okuthunyelwe namavidiyo amaningi ngaphandle lapho namanye ama-tweaks ongabheka. Qhubeka ukugijima
FSX bese uyivivinya ngemuva kokwenza lezi ziqu. I-3 yokuqala engibhalisile ekuthunyelwe kwami ​​ingasetshenziswa konke ngesikhathi esisodwa kodwa noma ikuphi
yenza emva kwalokho kufanele ulandelwe ngokusebenzisa i-FSX ukubona ukuthi kuthinta kanjani ukusebenza kwakho. Uma uyayithanda, gcina. Khumbula
inkulumo ethi " Uma ingaphuki ... UNGAKHULULELE "
Sebenzisa ifayela le-fsx.cfg ukwenza noma yikuphi ukuguqulwa kokushintsha kusuka kuleli phuzu kuya hhayi izilungiselelo ohlelweni lwe-FSX ngoba lungenza
bangela ezinye izinguquko ozifakile ku-fsx.cfg ukuze ubuyele emuva ku-default.
Isinyathelo 7: Ukungeza i-Add-ons
Uma usuhlolile futhi ugijima i-FSX kuzo zonke izindiza ezindala nezinde iDemo ngezinyathelo ezingenhla ezenziwe, bese uqala ukulayisha kwakho
engeza Ngesinye isikhathi BONZIKWA NGOKUQAPHELA NGAPHAMBI UKWENZA ABANYE. Ngale ndlela uma inkinga kufanele ivele.
Ngingabheja ukuthi uzokwazi ukuthi ungabheka kuphi! Into eyodwa engiyifisa ukuyidlulisa yizinhlelo ongazithenga ezaziwa
njenge-software bosterster ye-FSX. Kufanele bathuthukise ukusebenza. Konke engingakusho (ngombono wami) Ungayichitha lakho
Sikubona ngentambo elandelayo!
Isikhathi ukudala page: 0.274 imizuzwana